Nhau - Unoziva here kumisikidza zvakanaka kutsvedza kwemikova yegirazi
Iwe unoziva here kunyatsoisa inotsvedza magirazi madhoo
Neye inogara iripo hunyanzvi uye kuvandudzwa kwegirazi indasitiri, zvigadzirwa zvegirazi zvakanyatso kubatanidzwa muhupenyu hwedu, kushongedza mumhuri mune frequency yekushandisa girazi inowedzera uye inowanzoitika, uye musuwo wegirazi haungori chete muindasitiri yekuvaka inozivikanwa seinowanzoshandiswa Mukushongedza zvigadzirwa zvegirazi zvinoratidzawo zvazvakanakira, simbi yezvinhu kusarudzwa haina kuvharirwa kune vanhu vehuni, zvimwe kusarudza nezvegirazi, musuo wegirazi wakagadzirwa nekupenya uye kutenderera bvisa chimiro, kwete chete chinopa vimbiso pane mhando, iyo musuwo wegirazi wakakamurwa kuita akati wandei masitaera, girazi rekutanga girazi harina kuroora kana kuvhura musuwo, uye nekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, Kudiwa kwezvigadzirwa kunowedzerawo, saka girazi rinotsvedza musuwo panguva ino kusimuka kukuru , inokwezva vashandisi vazhinji, inopa vashandisi nezvakanakisa maficha, iripo mhedzisiro yacho iri nani, zvese maererano nezvezvinhu uye kutaridzika chitarisiko kune zvakawanda zvakanaka, zvakawanda vashandisi vekumisikidza girazi rinotsvedza musuwo kuchine kusanzwisisana, saka rega zvidiki zviitire munhu wese akaunza nzira dzinoverengeka dzekutsvedza musuwo wegirazi rekumisikidza:
Kuisa nzira yekutsvedza musuo wegirazi:
1. Joyshing inotsvedza musuwo nekuti yekutanga njanji bhokisi uye wozonamira zvidhina, rakavhenekerwa njanji bhokisi uye zvidhinha mharadzano haina kunaka kugadzirisa, kune kuvaka kweimwe nhanho yekuoma. Nekuda kune iyo track pasi peimwe kumanikidza, chidhinha chinosimbiswawo Yakareba nguva, yakapusa kuendesa kunzira iri padyo nekutsemuka kwezvidhinha.Kuwedzera, kana uri munzvimbo yakaita sekicheni chimbuzi mukati, orbit bhokisi nzvimbo iri nyore kuviga tsvina uye tsvina, mwenje wemwenje unounganidza dota kumirira kuwira pamusoro, kuunza dambudziko kuchenesa utsanana.
2. Chikamu chepamusoro chemusuwo wekutsvedza webhokisi bhokisi saizi yekuona kuti kukwirira kwe12 cm, 9 cm paupamhi.Sezvo bhokisi remaketeni, iyo track bhokisi rakaiswa mukati meiyo nzira, uye musuwo unotsvedza unogona kumiswa munzira. Nhasi uno madhoo mazhinji kana kuvhurika kuri pakati pe 1.95 kusvika 2.15 metres pakureba Chiitiko chinoratidza kuti kana kukwirira kwemusuwo kuri pasi pe 1.95 metres, kunyangwe angave akareba sei munhu, vanonzwa kushushikana zvakanyanya uye kusagadzikana. musuwo, kukwirira kunoda kuve mune ingangoita 195 + 12 = 207 masendimita pamusoro, iine nzvimbo yakakwana yekuita bhokisi rekutarisa ingangofunga kugadzira inotsvedza musuwo Zvikasadaro inogona kunge iri yekunze yakaturikwa chete, kureva orbit bhokisi rakafumurwa kunze, kusimbisa hakuna yakanaka, uye nguva yakareba, kuvhurika kwemusuwo uye metope kunogona kukura.
Hupamhi hwegonhi rinotsvedza rakanakisa.Iyakajairika saizi yegoridhe yemakiromita ingangoita 80 cm x 200 cm, muchimiro ichi, musuwo wakagadzikana. kunyangwe mamiriro epamusoro, anga arinani kugara munzvimbo iri pazasi isingachinjike, hupamhi hwemukova hunodzikira kana kuita musuwo unotsvedza zvishoma, chengetedza kugadzikana kwemusuwo uye kushandisa chengetedzo.
4. Kuchenjerera kushandiswa kubva pasi kusvika kumusoro kwemusuwo wakatsvedza (yakaturikwa njanji bhokisi) .Nechikonzero chekusunda kana uchinge uchinge uchinge uchinge wakakura zvakanyanya, nguva yakareba yekutsvedza musuwo uri nyore kuve kunze kwechimiro, kunze kwechimiro musuwo haigone kuvhura, zvakare zvinoreva kuti haigone kugadzirisa uye haigone kushandisa.